Nosy Koh Lan. Pattaya. Thailand ~ Journey-Assist - Nosy Coral. Pattaya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Lan
Koh Lan Island (Nosy Coral). Pattaya. Thailand
17 Febroary, 2020
Fijery feno ny nosy Koh Lan. sary
Nosy Koh Lan
Ny tany Koh Lan dia malaza be
Tsy ho hitanao eto ny fiainana manokana. Ko lan
Ity nosy kely ity dia antsoina koa hoe Coral. 10 km monja miala ny morontsirak'i Pattaya no misy azy. Koh Lan no tena malaza amin'ireo nosy Thailand satria fitsangantsanganana iray andro.
Sarintanin'ny Nosy Koh Lan
4,5 km ny halavan'ny nosy ity
Ambany - 2,5 km.
Tsy lavitra an'i Koh Lana dia misy nosy kely hafa, Koh Phai, na izany aza dia ampiasain'ny miaramila ka any ivelany no voarara tsy handany ny alina, koa ny mpizahatany mitsidika azy matetika.
Tonga any Koh Lan indrindra ny vahiny ho an'ny fitsangatsanganana iray andro na hitsidika ny moron-dranomasina, izay heverin'ny maro fa madio kokoa noho ny tora-pasika any Pattaya. Indraindray dia ny mpizahatany mandany ny alina ao Koh Lana, matetika - 1-2 alina.
Prices amin'ny Koh Lan
Ny haavon'ny vidiny amin'ity nosy ity dia avo kokoa raha ampitahaina amin'ny Pattaya. Manofa lamosina masoandro mandritra ny iray andro dia 50 ka hatramin'ny 100 baht (arakaraka ny vanim-potoana sy ny torapasika manokana). Labiera iray tavoahangy labiera eo ho eo amin'ny 120 baht eo amoron-dranomasina.
Inona no atao amin'ny Koh Lana. fialam-boly
Fotodrafitrasa ao Koh Lan
Na izany aza, ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina eto dia tena mivoatra. Misy hetsika maro amin'ny rano azo alaina amoron-dranomasina ho an'ireo mpanao fialan-tsasatra: mitaingina akondro, jet skis, kayaking ary parachuting. Afaka mahazo tatoazy sy tady eo amin'ny torapasika ianao. Ny snorkeling ary ny fisakafoanana aza dia hita any amin'ny toerana maro. Eto dia afaka manofa fitaovana amin'ireto fialamboly mavitrika ireto ianao. Ao amin'i Koh Lana koa dia misy ny fifampitifirana misy eo amin'ny tanànan'i Na Ban.
Fiantsenana sy sakafo amin'ny Koh Lana
Tsy misy dikany ny mividy sakafo ho an'ny fitsangatsanganana, ohatra, ary ento miaraka aminao any Koh Lan, satria azo vidina mora foana eto amin'ny Nosy izany.
Tsara ny fotodrafitrasa eto, indrindra indrindra dia misy sehon-trano misy famatsiana 7-ora 11-XNUMX, ary saika amidy avokoa ny vokatra. Ity tranombarotra ity dia tena akaikin'ny Na Ban Marina. Ao an-tanànan'i Na Ban dia misy ihany koa ny milina mivarotra mitondra rano fisotro misy rano.
Ary any amoron-dranomasina dia maro ny magazay kely misy sakafo sy zava-pisotro. Na dia eo am-piaran'ny làlan-jaza aza mandritra ny hariva dia misy lelan-tsoka.
Mijanona an'i Koh Lana mandritra ny alina
Misy ampy ny hotely amin'ity nosy ity, fa ny ankamaroany kosa dia mifantoka amin'ny faritra atsinanana, izay tsy misy morontsiraka. Ary vitsy ny hotely vitsivitsy mipetraka eo amoron-dranomasina. Ity, indrindra indrindra, ny Sakki Beach (eo amin'ny Pantai Va Vaen), Xanadu Beach (amin'ny morontsirak'i Samaya) ary trano fandraisam-bahiny maromaro any amin'ny ilany avaratr'i Koh Lana akaikin'ny torapasika.
Anisan'ny tombony azo avy amin'ny nosy ny fisian'ny lalana asphalt eo anelanelan'ny torapasika sy ny atiny rehetra. Misy ny tuk-tuks, taxi-be sy mpivarotra bisikileta.
Ny fisintonana ao amin'ny nosy Koh Lan
Kely ny toerana mahaliana any Koh Lana, na izany aza, ny tokana any amin'ny nosy, ny sehatra 2 mijery sehatra sy sarivongam-pivavahana no mahaliana.
Tempolista Buddhist Maysamran (Larnan'i Wat maisam)
Tempolista Buddhist Maysamran (Wat Maisam Larn) ao amin'ny nosy Koh Lan.
Izy io dia mitazona lanonana ho an'ireo mponina eo an-toerana sy ny moanina mipetraka ao mandrakizay. Ao amin'ny tanànan'i Na Ban no misy azy io, eo akaikin'ny fijanonan'ny tuk-tuks.
Afaka mandeha any Maysamran mandeha an-tongotra ianao, satria mila mandeha minitra vitsy monja avy amin'ny tsangam-baton'i Koh Lana ianao, izay antsoina koa hoe Na Ban. Rehefa avy niondrana nankany amin'ny nosy tamin'ny sambo sy nankany anaty marina ilay mari-pahefana, dia mila mandeha lavitra kely ianao, avy eo mihodina. Navela hiditra ao amin'ny tempoly maimaim-poana izy ireo.
Ny vavahady dia vavahady, ary ny farany ambony dia voapetaka. Manakaiky ny Buddha sculptural, izay aseho mipetraka eo an-damosin'ilay sokatra, misy lakolosy lakolosy 3 rihana sy gazebo kely, izay matetika miala sasatra ny moanina. Ny mpitsidika dia afaka miakatra ny tilikambo lakolosy, fa noho izany dia mila mangataka alalana amin'ny moanina ianao. Matetika izy ireo no mamela.
Tany amin'ny faritry ny tempoly ihany koa dia misy tsangambato hazo sy sarivongan'i Buddha, ary andriamanitra hafa. Ny sarivongana lehibe indrindra, ny Golden Sitting Buddha, dia miorina ao amin'ny tranobe lehibe indrindra amin'ny tempoly. Raha ny marina dia tsy vita volamena io sary sokitra io, hoso-doko amin'ny loko volamena fotsiny.
Sarivongan'i Buddha manodidina ny tempoly
Eo amin'ny lafiny roa dia sary sokitra volafotsy amin'andriamanitra. Anisan'ireny i Kuan Yin, andriamanitry ny famindrampo. Ireo tsangambato ireo dia tsy vita volafotsy, fa hosoratana loko volafotsy ihany.
100 metatra miala ny tempoly dia sarivongana Buddha iray, izay manana loko mainty. Ny haavon'ny haavony dia misy loko fotsy-maitso.
Damba fanaraha-maso akaiky ny morontsirak'i Samae
Damba fanaraha-maso ao amin'ny nosy Koh Lan
Ity misy gazebo, izay misy fotoana iray miala voly sy fialofana amin'ny tara-masoandro.
Manolotra fomba fijery tsara an'i Koh Lan sy ampahany amin'i Pattaya. Afaka miditra ao amin'i Khao Nom avy amin'ny samie Beach ianao na avy amin'ny voromahery lehibe ao amin'ny Na Ban. Miaraka amin'ny lamosinao mankany amin'ny ranomasina any Samai, mila manaraka ny lalana mankany amin'ny ankavanana ianao ary mankany amin'ny lalana mifanohitra amin'i Koh Lana. Rehefa tonga any amin'ny sisiny voalohany ianao dia mila mihodina miankavanana ary manohy ny lalana asphalt izay miakatra miakatra miaraka amin'ny tehezan-kavoana somary miolikolika. Ity lalana ity dia mitarika mivantana amin'ny toeram-pandrika.
Fiantsonanan'ny herinaratra any Koh Lana
Fiantsonan'ny herin'ny masoandro ao amin'ny Koh Lan Island
Eo ankavian'i Samaya dia afaka mahita ilay firafitra ianao, izay manana endrika endrika mahavariana ary mijoro manohitra ny fiavian'ny ranomasina, ny zavamaniry tropikaly ary ny torapasika noho ny tafo tany am-boalohany, izay misy takelaka solar maro be.
Raha jerena avy eny ambonin'ity orinasa mpamokatra herinaratra ity dia heverina ho toy ny lalambe midadasika tsy misy rambony tonga avy any anaty ranomasina. Tsy misy zavatra mahaliana ao anatin'ilay orinasa mpamokatra herinaratra. Ny ao anatiny dia natao amin'ny fomba an-dranomasina. Izay rehetra mety ho mahaliana dia eto an-tafontrano. Manolotra tontolon'ny panamaran'i Samaya sy ny faritry ny nosy indrindra izy io. Azonao atao ny miditra ao amin'ny tranobe fitobiana amin'ny herinandron'ny herinandro, ny vidin'ny fidirana dia tandindona.
Torapasikin'i Koh Lana
Ta Vaen Beach. Ny tora-pasika malaza indrindra ao amin'ny nosy Koh Lan
Beach Sangvan amin'ny Nosy Koh Lan
Beach samie amin'ny Koh Lana
Thong Lang Beach amin'ny Koh Lan
Tien Beach amin'ny Koh Lana
Nual Beach amin'ny Koh Lana. (Monkey Beach)
Nual Beach amin'ny Koh Lana
Tai Yai Beach amin'ny Koh Lana
Tai Yai Beach amin'ny Koh Lan Island
Ahoana ny fomba hidiran'i Koh Lan
Maromaro ny fomba azo ahatongavana amin'i Koh Lan:
Mitsangàna any Koh Lan.
Fitsangatsanganana iray andro eto dia mihena eo ho eo 1 000 baht.
Ny vidiny, ho fitsipika, dia ahitàna ny famindrana avy amin'ny hotely mankany amin'ny toerana izay miala ny sambo mandeha haingam-pandeha, hetsika amin'ny fiatoana amin'ny haingam-pandeha ambony, dia misakafo, antoandro, seza seza.
Amin'ny sambo hafainganam-pandeha.
Nandeha sambo tany Koh Lan izy ireo avy any amin'ny seranana Bali Hai any Pattaya, ary koa avy amin'ny toerana maro amoron-tsiraka Pattaya. Ny sambo amin'ny pier no mora indrindra: ny taona 150 ka hatramin'ny 400 baht (roa samy hafa).
Saingy amin'ny tora-pasika ianao mila manakarama sambo amin'ny vidiny iray manontolo kely indrindra 2 baht.
Ny tombony amin'ny sambo hafainganam-pandeha dia ny fahafahana milomano mankany amin'ilay nosy ao anatin'ny 20 minitra, tonga avy hatrany amin'ny tora-pasika tsara indrindra. Fa ny vidiny dia fahavoazana voafaritra.
Ferry mankany Koh Lan (mora vidy!)
Avy amin'ny seranana Pattaya pier Bali Hai no mandeha matetika amin'ny Koh Lan. Ity no safidy mora indrindra.
Fomba iray ihany no vidin'ny vidiny 30 baht.
Mandeha sambo ny sambo 40 minitra.
Halefa imbetsaka isan'andro izy io.
Tokony ho tsaroana fa ny faran'ny farany mankany Pattaya dia niverina avy any Koh Lana nankany Ora 17 (raha tsy izany dia mazava ho azy fa mikasa ny hijanona ao amin'ilay nosy ianao mandritra ny alina).
Tsy azo andalovana io ferry io, fa raha tsy izany dia mila mandany ny alina any Koh Lana ianao na mandoa vola be ho an'ny sambo milina hafa mankany amin'ny tanibe.
Ahoana ny fomba hahazoana any amin'ny ferry
Mba hisambotra sambo any Pattaya dia tokony ho tonga ao amin'ny seranan'i Bali Hai 20 minitra alohan'ny hivoahany ianao ary hividy tapakila eny amin'ny biraon'ny tapakila marina (ny biraon'ny tapakila dia hita ao anatin'ny tranoben'ny marina).
Avy eo dia mila mandeha haingana mitady sambo eny amoron-dranomasina ianao. Raha tsy misy tapakila ao amin'ny boaty boaty (afaka ihany koa izany), mila mandeha any amin'ny marina ihany ianao ary hikaroka ilay sambo miakatra, dia afaka mividy tapakila ho azy eo amin'ny fidirana amin'ny làlana.
Ny tapakila miverina dia azo vidina amin'ny fidirana amin'ny birao ihany, satria tsy misy birao fiakarana ao amin'ny Koh Lana.
Nandeha an-tongotra nankany Koh Lan ny Ferry ary miverina, matetika avy any Hat Ta Vaen, izay any amin'ny tapany andrefan'ny Nosy. Fa ampahany ampahan'ny ferry dia manatona ny seranan-tsambo ao Na Ban, izay hita any amin'ny ilany atsinanana.
Ilaina ny hanazava mialoha mialoha izay hialana amin'ny sambo ilaina aminao ara-potoana avy any amin'ny nosy mankany Pattaya. Azo atao tsara ny mahita eo amin'ny fananganana ilay mariazy Bali Hai marina. Misy fandaharam-potoana mazava sy azo aseho miaraka amin'ny sary hosodoko, ao anatin'izany ny Rosiana.
Rehefa tonga any Ta Vaen, hidina akaikin'ny tora-pasika ianao. Mila mandeha lavitra kely fotsiny ianao.
Ny vidin'ny taxi amin'ny Koh Lana
Fa manomboka eo amin'ny tsato-kazo amin'ny Ban mankany amin'ny tora-pasika rehetra tsy maintsy mandeha. Noho izany, Koh Lana dia manana taxi-be amin'ny vidiny 30 ka hatramin'ny baht.
Vidiny ho an'ny fitaterana (taxi) ao amin'ny nosy Koh Lan
Raha manapa-kevitra ny handeha any amin'ny morontsirak'i Koh Lana ianao, dia tsy maintsy ataonao milamina miaraka amin'ilay mpamily taxi fa hiverina aminao izy ary hitondra anao hiverina any amin'ny seranana. Ny mpamily fiarakaretsaka tsirairay ao an-toerana dia misy sarintany ny nosy, ka azonao aseho azy fotsiny hoe aiza no tianao alaina.
Nosy Koh Lan eo amin'ny sarintany
Ny ankehitriny dia eo amin'ny nosy Koh Lan + vinavina
Ankoatra ny voalaza teo aloha, manavaka ny toetrandro tsara i Koh Lan. Raha ny orana hatrany tsy mbola mivatravatra any Phuket sy Krabi (manomboka ny volana jona ka hatramin'ny novambra), dia maina kokoa eto amin'ity nosy ity fa tsy avy be indroa isan-kerinandro izany!
Eto ambany no ahitanao ny fiaran-toetran'ny toetrandro izay ahafahanao mahita ny toetrandro ankehitriny any amin'ny nosy Kolan ary ny toetr'andro toetr'andro mialoha ny telo andro mialoha. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny sosona tianao: alon-drano, rivotra, orana, rahona sy ny maro hafa.
Hevitra momba ny nosy Koh Lan. Pattaya (Google)
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 7